Home Wararka Wasiir Jamal Xasan & Xil. Cali Xoosh oo soo abaabulay dumar...
[Daawo] Wasiir Jamal Xasan & Xil. Cali Xoosh oo soo abaabulay dumar & Puntland oo xabsiga dhigtay
Xildhibaan Jamal Maxamed Xasan oo ka tirsan BJFS ahna Wasiirka Qorsheynta JFS iyo Xildhibaan Cali Xoosh ayaa soo abaabulay koox dumar ah oo ku mudaaharaaday Garoonka Mire Awaare ee magaalada Garoowe halkaas oo uu ku sugnaa MW Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Labadan masuul ayaa ka mid ah taageerayaasha ugu weyn ee Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Haweenka ayaa sitay boorar aay ku qoran yihiin “Kaligii Talis Dooni Mayno” & “Deni Dooni Meyno” ayaa markii aay la hadleen ciidanka Booliiska waxaa bilowday gacan ka hadal aay bilaabeen dumarka mudaaharaadayay.
Ciidanka Booliska ayaa xabsiga u taxaabay 15 ka mid ah dumarkii mudaaharaaday, waxaana shacab ku sugnaa goobta aay isla markiiba bilaabeen in aay toos ugu baahiyaan baraha bulshada.
Booliiska Puntland ayaa si anshaxa ka baxsan ula dhaqmay dumarkaas, walow loo soo abaabulay si ka baxsan sharciga oo looga gon lahaa in garoonka aay ka dhacdo rabshada iyo kacdoon shacab.
“Xil. Jamaal iyo Xil, Cali Xoosh ayaa masuuliyadda gabood falka loo geystay dumarkaas lagula xisaabtami doonaa” ayuu yiri sarkaal ka tirsan Booliiska Puntland oo MOL la hadlay